Best honiimuunu aga Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Best honiimuunu aga Europe
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 28/08/2020)
E nwere n'ezie ọ dịghị mma ebe na-na ịhụnanya karịa buru Honeymoon aga Europe.
Na ala nke ụgbọ okporo ígwè njem, ị nwere ike ịga tọn mara mma ebe gị honiimuunu. Na ọtụtụ anyanwụ, mara mma bays, ubi-vine, na-adịghị agwụ agwụ ihunanya hotel na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nhọrọ, it’s no wonder the Best honeymoon destinations are in Europe! Ebe a na-anyị n'elu Atụmatụ nke na-eme ihe ndị kasị nke a nleta na onye pụrụ iche.
Positano bụ a dị n'elu ugwu n'akụkụ obodo nta dị na ndịda Ịtali si Amalfi Coast. Dị ka akụkọ mgbe kere Neptune, Chineke nke oké osimiri bụ onye ya n'ihi ịhụnanya a nymph. Ya obere okwute beachfront na nkpoda, warara n'okporo ámá lined na ụlọ ahịa na cafes bụ ihe ọ bụ ma ama n'ihi na. Ị na nwunye gị kwesịrị ịga leta Chiesa di Santa Maria Assunta featuring a 13 na narị afọ Byzantine na akara ngosi nke Virgin Mary.
Gịnị mere na-arụ ọrụ ụfọdụ nke na agbamakwụkwọ achicha and head to The Sentiero degli Dei hiking nzọ ụkwụ, nke njikọ Positano ọzọ kpokọtara ala gbara osimiri okirikiri obodo. Rụchaanụ ụbọchị gị anya na a mkpagharị site oge ochie n'okporo ámá, chọpụtara authentic ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na akụkọ ihe mere eme ụlọ ọkụkọ na ugwu na nlele nke authentic nri. I nwere ike na-eche otú ị ga-ahapụ gị honiimuunu!
This picturesque and romantic village is an idyllic place to spend a few days as one of your Honeymoon Destinations In Europe. The n'anya agba aja aja, pink, odo na a kpụrụ ụlọ cascading ala n'akụkụ oké osimiri na crystal-acha anụnụ anụnụ Mediterranean mmiri bụ ma ama gafee ụwa na kemgbe mesmerizing ọbịa a-adọrọ ngalaba nke Italian n'ụsọ oké osimiri ruo ọtụtụ narị afọ.
Dị ka n'itinyekwu n'ime a dream, Positano bụ zuru okè n'ebe usọrọ ke ịhụnanya! E nwere ọtụtụ ihe ga-eme; ị na-n'aka na-enwe a njem nke a ndụ.
When it comes to finding your best Honeymoon Destinations In Europe, Hvar, Croatia bụ mgbe on di na nwunye anatara! Agha-idobe eke mara mma, oge ochie mgbidi gburugburu obodo na-adịghị agwụ agwụ-acha anụnụ anụnụ nke Adriatic: Croatia bu ezigbo ihe oma maka mmirichukwu ma obu nke ihunanya mini ezumike. Na ọtụtụ anyanwụ, ubi-vine, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nhọrọ, will ga-ahụ n'anya mgbe ị ga-aga njem mmanya na Europe na njem a dị ịtụnanya.
Biri na Croatia na Dalmatian n'ụsọ oké osimiri, Hvar bụ mba kasị ewu ewu n'oge okpomọkụ agwaetiti ebe. Anyị maara Agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ oké ọnụ, otú ị ga-enwe obi ụtọ ịmata na ọ na a maara dị ka ndị ọzọ ọnụ on the list of Honeymoon Destinations In Europe!
Nke a obere mgbidi gburugburu obodo jupụtara Gothic ije bụ zuru okè kwesịrị ekwesị n'ihi na di na nwunye na-achọ iru ala vibes na a obere akụkọ ihe mere eme na nlegharị anya n'ụbọchị. Mgbe gara bụ otu n'ime ụzọ kacha mma ịhụ Croatia n'ozuzu-ma mee ka ihu ya, also a great way to arrive on a honiimuunu-as nke ọnwa, Über ka eze rutere n'ógbè, ma-adịghị na otú i nwere ike na-eche.
Save A Train anaghị njem ozugbo Hvar, Croatia. anyị na-eme, Otú ọ dị, njem na njikọ ụgbọ na nwere ike inwe ị na ebe ị chọrọ ịga!
UberBoat na Croatia
The popular transportation app is atọhapụ UberBoat na Croatia, na-eme ka ọ dịrị ya mfe karịa mgbe ọ bụla na-enwe a ụbọchị na oké osimiri na-egbuke Adriatic Sea. Previously launched in Miami and Istanbul, UberBoat bụ ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ya sexist SUV nwetara ọnụ na a onwe ụgbọ mmiri. Gị na-oku na-aga irenti ga- dị nnọọ ka mfe ka akwụkwọ gị über ngwa dị ka a ụgbọala na ga-abụ dị ofụri Croatia na ndị ọzọ na-ewu ewu njem nleta hotspots ka Split, Dubrovnik, na Korcula Island.
Switzerland might not be the first place to come to mind when you think of Honeymoon Destinations In Europe, ma ọ bụ maa mma ịtụle. Ọ bụ ezie na obere ikwu kasị mba Europe, Switzerland nwere enwekwa eke mma. Ebe obodo nta, ọkaibe obodo, ọgaranya omenala nketa na a pụtara backdrop gị honiimuunu ma ị gaa na oyi, spring, oge ọkọchị ma ọ bụ ịda.
Zurich bụ a ọdịbendị n'Ihe Omume City na na anyị na n'elu obodo ileta. The fairytale Lanes, sinik waterfront promenades, na snow-capped ugwu ke ndabere maka ịtụnanya foto! A ole na ole aro maka eme na-agụnye; Na-eje ije gburugburu Lake Zurich shoreline na obodo ihu. Rent a paddleboat ihu obodo si a pụrụ iche n'akuku. ozugbo onboard, ị pụrụ na ihunanya vistas nke quaint-na-achọ gburugburu obodo, esonyere ndị bi swans.
Ọ bụrụ na ịzụ a diamond bụ na burukwa, mgbe ahụ ị na-na na na-nri ebe! Ị ga-ahụ ọtụtụ on Zurich si Bahnhofstrasse, nke a na-kpọrọ nke ise Avenue of Switzerland. Na Zurich luxe watchmakers na jewelers, nakwa dị ka ngalaba na-echekwa, anwa shoppers na-egbuke egbuke bụ window ngosipụta.
Ikpeazụ anyị ebe bụ – Rome, Italy
Italy isi obodo bụ a obi ụtọ maka newlywed di na nwunye. ọ bụ otu n'ime ndị kasị gara na ndepụta nke honiimuunu aga Europe, Ọ bụ zuru okè na-enwe akpa ụbọchị ole na ole di na nwunye. si ya cobbled n'okporo ámá na iriba ama na ngosi ihe mgbe ochie, ekiri fim, na ihunanya ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ị ga-adịghị agwụ agwụ ahụmahụ na-enwe ọnụ.
Ị ga-eleta The Roman na-eme egwuregwu! Ha na-mara gafee ụwa maka ha ịdị ebube na ntị zuru ezu. Efu ekiri fim na a anya ka le. Mgbe ọ na-amalite-ada na arụmọrụ nke kasị mma opera nka, ahụmahụ bụ ike na-akọwa.
Gba ama a na-eme opera na Rome amphitheater kwesịrị ịdị na ndepụta aha ịmere gị.
N'ihi na di na nwunye na-abịa site na ndị ọzọ Italian obodo, eru Rome ụgbọ okporo ígwè nwere ike ịbụ onye na mma nhọrọ. Roma Termini, Rome okporo ígwè na jikọọ dị iche iche Italian na European obodo. Doputa oche gị tupu. Jiri Save A Train ka akwụkwọ na-enweghị ego ụgbọ oloko gị njem na nkeji.
We hope we have given you some inspiration for your Honeymoon Destinations In Europe. Jide n'aka na ị akwụkwọ niile ụgbọ oloko gị njem site Save A Train iji hụ na ngwa ngwa, ọnụ ọrụ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhoneymoon-destinations-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#honiimuunu #romance europetravel ihunanya
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe